Mangataka amin’ny tompon’andraikitra ireo mponina mipetraka eny Ambohimamory Itaosy amin’ny tokony hasiana zotra hafa mifaninana amin’ny zotra 133 miasa eny an-toerana. Mampitairana ny olona ny fomba fiasan’ireo zotra 133 mampitohy an’Analakely sy Ambohimamory amin’ny fanajana ny mpandeha, toy ny fihodinana tapa-dalana eo amin’ny garage 67 ha sy eny amin’ny Fiaro Ampefiloha. Tokony hisy zotra hafa toy ny mankeny amin’ny hopitaly Itaosy.
Fiara roa indray nivadihan’ny kamiaobe nitondra kaontenera teny Ampasika, omaly antoandro. Kaontenera feno entana ity nianjera teo ambony fiara roa ity. Tsy fantatra mazava izay antony nahatonga ilay fiara nivadika teo amin’ny arabe ka nifatratra tamin’ireo fiara nijanona teo amoron-dalana izany. Tsy nisy ny naratra na aina nafoy tamin’ity fianjerana kaontenera ity.
Olona roa indray, naratra mafy voadonan’ny fiara Peugeot boxer iray hihazo an’Antsirabe teny Tsaramanga fokontany Ankorondrano, kaominina ambanivohitra Tsiafahy, ny asabotsy tolakandro teo. Vokatry ny fandehanana mafy teo amin’ilay fiara no voalaza fa nahatonga ny loza ka naratra tamin’izany ireo olona roa nandeha tamin’ilay moto. Tsy nisy ny aina nafoy. Nalefa notsaboina ao amin’ny hopitaly HJRA ireo naratra. Tonga nanao fanadihadiana teny an-toerana ny zandary avy ao amin’ny poste avancé Ambatofotsy.
Niharan’ny fanafihan-jiolahy nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika ny tokantrano iray eny amin’ny fokontany Ankadindravola Ivato, distrikan’Ambohidratrimo. Nodarohan’ireo jiolahy ny renim-pianakaviana iray 34 taona tao an-trano. Nikasa hanolana azy, ireo jiolahy fa tsy tontosa izany, raha ny fanazavana voaray hatrany. Lasan’ireo mpanafika ny entana sarobidy rehetra tao an-trano. Nitsoaka avy hatrany ry zalahy taorian’izay. Ny zandary avy ao amin’ny poste avancé Ankadindravola no misahana ity raharaha ity.